China Portable Tescar Therapy CET RET RF miaraka amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy Vacuum System | MENOBeauty
Portable Tescar Therapy CET RET RF miaraka amin'ny Vacuum System
2021 Masinina mamolavola vatana tsara indrindra
448khz fitsaboana Tescar CET RET RF miaraka amin'ny Vacuum
● Teknolojia ：
RET Resistive RF miaraka amin'ny vacuum
448KHZ RF matetika
● Function ：
1) Mampiroborobo ny fizotry ny ra ary manatsara ny metabolisma sy ny tsimatimanota.
2) Mifehy ny endocrine, manatsara ny torimaso, manala ny havizanana.
3) Manala sy manasitrana ireo faritra samihafa amin'ny vatana, toy ny spondylosis vozongo, vozon-tranonjaza, soroka mangatsiaka, sns.
4) Fiakarana tarehy, fanatsarana ny lokon'ny hoditra ary hampihena ny fahanton'ny tarehy.
5) Manatsara ny haben'ny vatana, mampihena ny tavy matavy loatra, manalefaka ary mamolavola.
6) Avereno amin'ny laoniny ny sela sy ny sela.
7) Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sprains ligamenta, ny hozatra, ny fahasimban'ny hozatra ary ny fanaintainana
8) Mamaha ny soritr'aretin'ny hatsiaka amin'ny vatana, metabolisma basal ambany, tanana sy tongotra mangatsiaka sns
● Fitsipika CET
Ny CET dia mari-pana tsy miova amin'ny épérermis, ary ny hafanana amin'ny radio lalina no teknolojia fototra hiantohana ny hoditra mahazo aina ary tsy simba. Avy eo, ny satroka dia ampiasaina hiteraka famokarana angovo hafanana, izay afaka mahatratra ny sosona lalina amin'ny hoditra ary mandrisika ny fivezivezena haingana ny ion sy ny potika koloidaly ao amin'ny vatana. Na mihetsiketsika, ny Capricorn dia miteraka hafanana ary miaraka amin'izay koa, eo ambanin'ny asan'ny teknolojia famolavolana molekiola polar, manafana ny vatan'ny collerman'ny dermis. Rehefa mahatratra 45 ° C-60 ° C ny angovo hafanan'ny vozon'akanjony lalina dia mamokatra haingana avy hatrany izy io, manentana ny famoahana collagen vaovao vaovao hamenoana ny bikan'ilay collagen atrophic sy very ary mamerina manamboatra sy mamerina manamboatra ilay fofona malefaka ny hoditra. Amin'ny farany mahatratra ny fanamafisana ny hoditra, mameno ny ketrona, mamerina amin'ny laoniny ny hoditra ary mamirapiratra.
● Fitsipika RET
Ny fitaovana avo lenta matetika RET dia fitaovana mampihena lanja izay mampiditra angovo avo lenta ao amin'ny vatan'olombelona, ​​miteraka hafanana lalina avy amin'ny sosona amin'ny hoditra sy ny hoditra, ary mamaivay ny tavy amin'ny vatana, amin'izany dia ahazoana fihenan'ny lanja. Rehefa omena hery ho an'ny vatan'olombelona ny fivezivezena avo dia avo dia kely dia kely ny amplitude vibration, ka zara raha mamorona ny fihetsiky ny ion, ary tsy misy réaction electrochemical na decomposition electrique. Raha ampitaina amin'ny vatan'olombelona ny matetika dia hafanana ny vatan'olombelona. Izy io dia satria rehefa ampiharina eo amin'ny vatan'olombelona ny riandrano avo lenta, isaky ny miova ny làlan-kizorana, dia hihovotrovotra ireo molekiola mandrafitra ilay sela ary hifampikoropaka mba hanao fihetsiketsehana fihodinana, fanodinkodinana ary fifandonana. Ity fihetsiky ny molekiola ity dia hiteraka hafanana amin'ny vatan'ny olombelona.
● Teknolojia fanamafisana ny gadona CNC
Amin'ny alàlan'ny lamina metrika CNC, ny pressur ratsy dia mitambatra miaraka amin'ny lohan-tsofina miiba amin'ny tsindry ratsy, arakaraka ny toe-piainan'ny vatan'olombelona, ​​izay mampiditra ny halalin'ny fametahana sy ny fanorana ny sosona epidermaly amin'ny hoditra, ny lalan-dra, ny tavy matavy ary ny rafi-pitabatabana, noho izany izy io dia afaka manatsara ny fikorianan'ny tsiranoka eo anelanelan'ny olombelona, ​​mampitombo ny fivezivezen'ny sela, mampihetsika ny sela, mampiroborobo ny fivezivezan'ny rà sy ny lioka amin'ny lalan-drà tsy azo jerena, manafaingana ny metabolism ary manatsara ny tontolo anatiny amin'ny hoditra.
Teo aloha: Q0 Slim Vacuum Roller + Cavitaton + RF + Jiro tsy misy fangarony
Manaraka: Andalana 11 HIFU ho an'ny tarehy sy vatana
Masinina Racu vacuum Rf
Masinina Rf Home
Masinina Mini Rf
Masinina Rf Monopolar
Masinina Rf Multipolar
Rf Machine Machine
Masinina Rf ho an'ny tarehy
Masinina Rf Ultrasonic Cavitation
Physiotherapy vertikal Diathermy RET CET vacuum ...